Relaxing wallpapers pack kubva kwakasiyana distros | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chitarisiko / Kuita munhu, Chigadzirwa, GNU / Linux
Zvakare ndinokuunzira wallpapers, uye kamwe zvakare ini handipe zvido kune yakatarwa distro 😀
Heano mamwe mapikicha eakasiyana madistros, pasina akawanda mhedzisiro, yakachena mamiriro, mcder (senge ndanga ndichiisa mazuva ano)
Kunyange zvakadaro, pano ndinovasiya:
Ini ndinoshandisa iyo Arch pachena, ichit iri kushandisa iyo ye Debian 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Relaxing wallpapers kurongedza kubva kwakasiyana distros
Kekutanga nguva pandinoona chero Fedora pano
Nenzira, pane chero munhu anoziva kuti ndeipi distro yekupedzisira?
Ndatenda nezano 😀
Kutanga iwe kuona chero Fedora pano? ... zvakanaka ngatione kana tichiverenga zvinyorwa zvakanaka.
Izvo zvinhu ndezvekare kudarika Methuselah
Usasanganise neiyo Fedora theme mazai futi. Saka nei usingazvipire iwe kutsvaga zvinyorwa zvakanaka nezve ino distro uye wozviburitsa?
Nekuti kana ndikapedza nguva yese ndichinyora zvinyorwa zvinozove zvisina basa, ini ndinosarudza kunyora mashoma uye akanaka kune vakawanda uye akaipa.
Uye ini ndiri kutanga nemabvunzo.
rodolfo alejandro akadaro
Ini ndanga ndisingazive yekupedzisira, nenzira iyo resolution ndeipi? Ini ndichatora iyo Arch distro yandinoshandisa.
1920 × 1080 kana ndichirangarira nemazvo 😀
Uye ini handizive wekupedzisira kana haha.
Zvino ini ndoda kuona inonakidza fund pack ndapota (ndakaudzwa kuti uri nyanzvi).
Iwe unotaura neumwe weanyanzvi zvakanyanya mune yakaipa reggaetonero mamiriro mune rese blogosphere… El Carcamal Arenoso!
Usasanganise hunyanzvi hwekufananidzira ne "reggaeton." Ini ndinobvuma kuti ini ndakateerera kune mamwe mavhidhiyo ane mimhanzi yemubvunzo usina mubvunzo wekuona swagger yevakadzi vanonakidza. Asi vakadzi vasina kupfeka kwakasarudzika hunyanzvi. Iyo imwechete yakanaka kuravira sekuisa paVincent van Gogh XD canvas.
Kuisa iyo mari mukati mune yakashata kuravira
Zvishoma sei zvaunoziva iwe nezve hunyanzvi.
Ndinokupa maropafadzo angu.
Chokwadi. chivindi Haana kufanana nevamwe vese ... haazive kukoshesa kunaka kwechikadzi, kunyangwe angave aine ganda remusikana akanaka masendimita kubva kumeso kwake.
Ok, ndichagadzira chinyorwa pamusoro peLinux wallpapers, asi nevasikana 😉
Zvichakadaro, ndinokurudzira izvi zvinyorwa zvandakaita mukati Artescritorio.com:
Kwazisai uye munakirwe ... Ndinoziva muchadaro 🙂
Chokwadi. Kushinga hakuna kufanana nevamwe vese ... haazive kukoshesa runako rwechikadzi, kunyangwe angave aine ganda remusikana akanaka masendimita kubva kumeso kwake.
Zvakanaka, ndinoziva vasikana vakanaka, mumwe wavo ndizvo zvaunofunga (dai waibva kuMadrid ndaikuratidza pikicha).
Chandisingazive ndechekuti ungazviise sei mumusoro mako kuti ini handisi webasa rekuita musikana kuti amukuvadze neimwe nzira. Kana pakupedzisira ndinozviona ndiri kuCuba ndichikuvadza mukadzi pamberi pemhino dzako ...
Uye hongu, iwo mamiriro ekunze haana kunaka.
Enda unotarisa vhidhiyo paNigthwish yandakakutumira uye usabata mhino dzako.
Iwe waisa yakawanda yezvinhu, zviripo zvose zvinenge zvese zvinonaka. Ini ndinokuona iwe kunge akanaka kumeso ;-).
HAHA hongu, kumeso kuri kana kusiri iko kunyanya, chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo 🙂
Kunzwa kunotanga kumeso 😀
YAKAKONZESWA: Ini ndaisawo yakawanda yezvisiri-zvemusikana zvemukati, zvinhu senge anime nezvimwe haha ​​😉
Ndine hurombo chaizvo asi iwe une zvakafanana nevakadzi mubutiro XD. Kana ivo vasiri maJapan, hazvina kukodzera kuvaisa kumashure ahahaha
Kune maAsia anokwezva uye vamwe vanoita kunge vasina kukwezva kwandiri. Nekudaro, kune avo vanofarira vakadzi vanokanganisa uye vamwe vanosarudza vakadzi vasingafarire.
Ini handisi kunyanya kukakavara pamusoro penyaya idzi, ini ndoda kuyedza akasiyana akasiyana kuti ndione zvakanakira / zvisizvo zvehurongwa hwese.
Imi mese mune kuravira mudhongi renyu, vasikana veAsia vese vari kushata zvakashata.
Iwo akanakisa ndeaya andakataura mune imwe foramu post
Oo, uye iyo "iwe" inonzwika zvakanyanya kuita kwandiri me
Pano isu tese tiri chikamu chemhuri imwechete 😉
Ndozviri musitayera nevanhu vezera rake 😛. Ini ndakabatwa nemweya weKushinga, ndinoda mweya wekudzinga mweya.
Zvakanakisa, ndiri kushaya Slackware.
Hazvichashaikwi… - » https://blog.desdelinux.net/wallpaper-relajante-slackware-trisquel-puppy-linux-splash-gimp/
Ndinovada vese, zvakapusa uye dzakanaka 😉
Mhoro, wakadii hako .. ndauya kwauri zvakare sezvo ndine mazuva ndichifunga mushure mekutaura kwekupedzisira uye ndine maziso mashoma ejejje
Ndinoda kuti unditungamirire zvishoma nezve chii musiyano uripo pakati peKISS distro uye Roling Release?
Tarisa zvandakusiira mune imwe posvo, nekuti ivo zvinhu zvakazvimiririra
Zvakanaka kana ndikangoverenga .. zvakanyatsonaka .. zvishoma nezvishoma ndiri kunzwisisa ... asi pese panobuda mimwe mibvunzo xD
Semuenzaniso, odhiyo nemavhidhiyo macodecs sezvo ari asina kukwana, ndeipi mhedzisiro iripo kana kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni nyowani, kana ndikaisa gnome shell inozongo gadziridza kana vhezheni itsva yaburitswa ect ect
Mibvunzo yakafanana neiyo xD
Ini ndinoda yaSabayon, ndinofunga ndichaishandisa, nenzira, peji hombe, ramba uchienda seizvi: p
Ndatenda haha, zvinofadza kuziva kuti unofarira mipiro yedu midiki 😀
Zvino muchinguvana ndichakupa mimwe mirairo uye ndinokusiira maArch magaidhi ari mublog kuitira kuti undiburitse ipapo kusahadzika
Ohhh hermazo ndimi makanakisa 😉 ndingafarire .. I leave you this link so that you can laugh a while looking at the images xD
Ini ndichave ndakamirira vatungamiriri 😉
Haha ini ndaida kubaya ubuntosos neiyo hahaha:
Iwo maArch ekuisa magwara kubva kublog ndeaya:
Pane imwe iri mu forum, asi sevha iri pasi.
Chekutanga pane zvese ita kumisikidza muchina chaiwo
Zvakanakisa .. ndiri kuverenga zvakaoma !! Tarisa pc yangu haina graphic yekumhanyisa, inongounza yakasanganiswa vhidhiyo ngarava G41 intel .. ndinofanira kuisa chimwe chinhu here kana kuti ndinotevera nhanho sezvakaratidzwa imomo mumagwara?
Chii chipset icho? Intel 945… Intel 960, ndeipi?
Kunyangwe, ini ndinofungidzira kuti kuisa xf86-vhidhiyo-intel kuva zvinopfuura zvakakwana 😉
Tarisa izvi http://gespadas.com/archlinux-instalacion
Chokwadi .. nekuti maitiro acho haana kureba asi anonetesa, unofanirwa kuisa ruoko rwakawanda mune zvese .. muchina muchina wandichaita.
Kuti udzivise izvozvo, ndakagadzira yangu yekuisa script. Ndino mhanya uye iyo yega inoisa ese mapakeji andinoda haha.
Hei, asi hauna kupindura zvandakubvunza nguva yadarika:
-Chii chakaitika kune odhiyo uye vhidhiyo macodec?
- Uye iyo Flash ??
- Mu linux mint ini ndakaisa iyo Arial font nemirairo iyi:
"Sudo apt-tora kuisa msttcorefonts"
Ini ndinofungidzira kuti mune arch ingave iri: pacman msttcorefonts ???
Ah chaipo 🙂
Kuisa odhiyo uye vhidhiyo codecs, muDebian semuenzaniso ndinofunga iwe unoisa iyo GStreamers handiti? Ndaisa:
Uye voila, iwo ese maODHODI ezvese zvinhu 😉
Masosi andisingazive, ndinofunga angave nekuisa aya mapakeji:
Kunyangwe iwe uchigona kugara uchiteedzera mafonti kufolda inonzi .fonts (mumba mako, kana isipo, gadzira iyo) uye ndizvozvo 😀
Makandibata pamubhedha, garai muchifunga kuti hurongwa hwangu hwakasiyana necarcamales iri pa blog.
Shit a *** zvisizvo.
Ah huya, kana iwe ukaisa mukati komendi "Hande" kufamba ... LOL !!!
Chokwadi, asi ini ndakagadzirisa, kwete senge imwe ine iyo "webos"
Vertale zvakanyanya handizive !! asi chandinoziva ndechekuti ngarava yangu yakasanganiswa yevhidhiyo inoti intel G41
Akanaka mapikicha, ndaida fedora 😉
Ko zvakadii homwe yakadaro yeisina zita ...? xD (sekuseka)
Arch ine hwaro hwakareruka kupfuura Ubuntu. Kana iwe uchida kunyora yako wega tsanga, kuyedza CVS-chete mapurojekiti, kana kunyora pasuru kubva kunobva nguva zhinji kazhinji, Arch iri nani akashongedzerwa. Kana iwe uchida kubatidza komputa uye ukwanise kukurumidza kushandisa iyo software software pasina kuwanda kwakanyanya, Ubuntu iri nani akashongedzerwa. Kazhinji, vashanduri nevashandisi vemberi vanogona kunge vachida Arch pamusoro peUbuntu.
Ini ndakanyatsojeka !! Ini ndinofunga kuti parizvino handizo gadza Arch seyangu base system, asi zvakadaro ini ndichave ndichiyedza nemuchina chaiwo 🙂
Saka izvo zvataura, ndinofunga hazvina kunaka kushoropodza mushandisi anoshandisa ubuntu kana linux mint .. nekuti sezvakaratidzwa ipapo uyo anoshandisa ubuntu ndeyekuti anoda kuvhura komputa uye agone kukurumidza kushandisa iyo software software isina kugadzirisa zvakawanda ..
Izvo zvatove nyore kwazvo !! hazvidi kuti utsanangure zvakawandisa kana kutaura kuti iyo system yeubuntu haishande 😉
Nezve Debian ahahaha ndakafarira tsananguro yacho zvakanyanya:
Arch ndiko "kufamba" kugovera, nepo Debian Stable ichiburitswa ne "chando" mapakeji. xD
Chaizvoizvo muArch hazvisi zvekuti unofanirwa kunyora zvakawanda, hapana kana chaicho chaizvo 😉
Usatombotenderedza !!! Unozoti iwe haufanire kunyora chero chinhu chaunoshandisa .. Nekuti ini ndinogona kukupa iwe mishoma mienzaniso mune yangu kesi 😛
Pacman + Yaourt inoita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi vasingade kuumbiridza.
Yourt -S package uye voila ... iyo script inotorwa uye yakanyorwa yega, pasina iwe unofanirwa kunge uchitarisa kutsamira, kugadzirisa maraibhurari, kugadzira zvinongedzo, nezvimwewo.
Chaizvo waunoshanda naye .. Iwe unofunga kuti Yaourt anoita sei? Well compile or pre-compile .. Ndozvandiri kureva.
Hunhu hunoshoropodzwa, kwete hunteros
Fedora yakabva kuRed-Hat. Iyo ine nharaunda huru, mazhinji pre-akavakwa mapakeji, uye yakawanda rutsigiro rwuripo. Fedora yakavakirwa paRPM mapakeji. Arch inoshandisa pacman kubata .tar.gz mapakeji. Fedora haadi kutsigira MP3 nekuti ivo vanofunga kuti inokonzeresa patent matambudziko. Arch inoregerera zvakanyanya maMP3 uye mamwe marudzi emafaira emultimedia. Fedora anoshandisa graphical kuisirwa. Arch inoshandisa incurses-based kuisirwa. Fedora inotungamirwa zvakanyanya neGI. Arch ndiyo yakapusa sisitimu kupfuura Fedora, ichisiya mushandisi kumisikidza zvinhu neruoko. Arch yakagadziridzwa i686. Fedora ine pre-yakatsanangurwa kuburitsa kutenderera. Arch ine "kufamba" kuburitsa system. Dhizaini yeArch inoitwa kuti ive yakareruka sisitimu pane ye otomatiki system.
Arch iri nyore kwazvo kupfuura Debian. Arch ine mashoma mapakeji. Nekudaro, Arch inopa rutsigiro rwuri nani pane Debian yekuvaka ako ako mapakeji. Arch inobvumidza zvakanyanya kana pasuru ichitsanangurwa se 'isina-yemahara' neGNU. Arch yakagadziridzwa kune i686 processor. Mapakeji eArch matsva kupfuura aDebian's (kunyangwe pabazi rayo risina kugadzikana). Ivo vaviri vane rakanakisa pasuru manejimendi system. Arch ndiko "kufamba" kugovera, nepo Debian Stable ichiburitswa ne "chando" mapakeji.
Zvinhu zvishoma zvandisina chokwadi nazvo.
- mupfungwa ipi Arch iri nyore pane Debian?
- Zvakafamba sei kuti Arch inopa rutsigiro zvirinani pakuvaka ako mapakeji?
- Arch yakagadziridzwa sei kune i686?
Mhoroi, zvakanaka ini ndakateedzera iyo kubva kune yepamutemo arch peji uye ini ndaida kuigovana newe .. asi pachangu ini ndinoda Debian xD
Kana isu tikateedzera izvo windows windows inoti, windows ichave iri yakanakisa yekushandisa system munhoroondo ahahah.
Ini ndaisa Debian mune nyanzvi modhi uye Arch iri nyore, inoisa zvishoma nekukasira, asi ndinoziva kuti kana iwe ukawana seizvi hapana nzira newe.
Zvakanaka, ndinofunga kutaura kuti Arch iri nyore uye nyore kuisa pane Debian yakawandisa. Chete danho reDebian rekuparadzanisa rinopfuura Archlinux nekure. Asi hapana, izvo zvinoenderana nekuti ndiani anozvitarisa.
Ndini pandakati zviri nyore kuisa? Zvandataura ndezvekuti system iri nyore
Ichokwadi kupatsanura muDebian mune zvinyorwa maitiro zviri nyore kwazvo .. Tenda Mwari ejejje xD
elav mukoma maswera sei! mubvunzo nderipi bazi rauri kunongedzera uye nharaunda ipi yauri kushandisa parizvino muDebian?
Ndine girazi remuno reDebian Testing repository. Asi kana ndikashandisa iyo internet, vaizove aya:
Senzvimbo yedesktop ini ndinoshandisa Xfce, kunyangwe dzimwe nguva ndichichinjana neCinnamon, Openbox uye RazorQt 😛
Hukuru. !! Ndiudze chimwe chinhu, unotova neLibreOffice 3.5 uye VLC 2.0?
Pave neinopfuura vhiki ndichibva ndakwanisa kumutsiridza zvinyorwa zvangu, nekuti sevha kubva kwandinozvifananidza ine matambudziko. LibreOffice ndakariisa manyore ne .deb kubva kune yepamutemo saiti. Uye ini handizive kana iyo VLC ichange yatove mune zvinyorwa kubva pane zvandakakuudza kare.
Ah ok ok .. hongu ndainzwisisa chaizvo .. chimwe chezvikonzero nei ndaifanira kudzokera kuUbuntu ndechekuti ini ndaisaziva kuisa libreoffice 3.5 mukuyedzwa kwedebian ... uye kubva pane zvandinonzwisisa haisati yasvika kumidziyo ye debian iwe wakariisa manyore !! kana ndachiwedzera, ndinenge ndichifambirana nemapakeji ari mubazi rekuyedza 🙁 uye nekuisawo ariari masosi mune debian .. unoziva kuzviita?
Ini ndatora pasi yepashure iyi asi ini ndinoshandisa chakra imwe isiri pano>.
Ini ndinotora iyo kubva kuvhuraSUSE
Mazuva maviri apfuura ndanga ndichitsvaga mari dzeruvara irworwo uye ndaisaziva kutsvaga. Inoisa mabhuruu kumashure asi iwo ruvara hausi webhuruu, kana bhuruu jjajjaja saka hapana chandakawana. Maita basa vazadza pfungwa dzangu 😀
hahahahaha mufaro 😀
Kune avo vaida iyo Slackware Wallpaper.
Aya ini ndave kutoda murume, ivo vanoita bonde hahaha
Ini ndinoda logo yemureza iwe unayo padyo neiyo Firefox XD logo
Handina komputa yangu kana mari yeimwe
Varume vakanyarara, nguva yenyu ichauya yekuti mukwire sezvazvinofanira kuita 😉
Ndiri kuedza kutengesa zvinhu kuti nditenge imwe
Ini ndichangopedza iyo Wallpaper yaPardus
Mamwe mashoko: http://koresource.blogspot.com/2012/02/hb-wallpaper-pack.html
Guillermo Abrego akadaro
Hei, chii chakaitika kune iyo Ubuntu Wallpaper ... ndiyo yega yega yekuparadzira kukuru kwandiri kusuwa pamwe chete naMandriva
Pindura Guillermo Abrego
Iyi Wallpaper pack inongosanganisira izvo zvinogovera zvinoshandisa KDE nharaunda kana zvine chinobva pane iyo nharaunda.
Ini handigadzire Wallpaper yemamwe mamiriro uye kugoverwa kusina KDE mune avo ekuchengetera.
Asi zvakadiniko nezve Kubuntu iyo inoshandisa KDE nekukasira, hazviverenge here?
Kubuntu musiyano weUbuntu ne KDE uye ine iwo Wallpaper (Iyo iine magiya)
Mhoro ndinoda kukukorokotedza iwe pa blog, ini ndiri mutsva kuLinux kwemwedzi mishanu pa ubuntu (ini ndaive windolero pamberi) uye nezuro ndakaisa archbang paPC, (nekuti Arch ichiri kundipukunyuka) palaptop ndine mint Julia wekadhi rakakurumbira kadhi kubva kuna Intel gma5, mari yacho yakanaka kwazvo, ndinotarisira kudzidza zvishoma nezvishoma pamusoro penyika ino
Gamuchirai davidlg. Zvakanaka, inzwa uri pamba uye chero mibvunzo, unogona kuitora kune yedu foramu.
Mhoro uye gamuchira David 🙂
Kunakidzwa kuve newe pano, kana uine chero mibvunzo kana matambudziko iwe unogona kuenda kuforamu yedu, tisu takafanana isu vatinogovana pano pablog, tichida kwazvo kubatsira 😀
Kwazisai uye gamuchirai zvakare 😀
Iko hakuna kumashure redhat, ufff fuck
ahahaha tsvuku ngowani ahahahahaha
hahaha, hapana chekuwedzera: yekutanga os.
... asi nemamwe marogo ... 😛
Ubuntu 12.04 Beta 1 inowanikwa!
Maitiro ekuratidzira mosaic windows muOverbox